Mootummaa Itiyoopiyaa Kallattiin Jalaa Wal Dh’aee -
Mootummaa Itiyoopiyaa Kallattiin Jalaa Wal Dh’aee
bilisummaa August 5, 2015	Leave a comment
Waa’ee siyaasa Itiyoophiyaa kan hordofaniif hayyuu biyya Faransaayii kan ta’an Rene Lefort dhiiyeenya kana barreeffama mata dureen isaa “Ethiopia a Leadership in disarry“ ykn mootummaa Itiyoopiyaa kallattiin jalaa wal dha’e jedhu maxxansanii jiru.
Lefort waa’ee Itiyoophiyaa fi keessumaa waa’ee biyyootii Afrikaa uffee sahaaraa gadii baroota 1970mootaa kaasee maxxansaalee biyya Faransaayii kan Akaka Le Monde, Liberation, fi LE Nouvel jedhamaniif barreessaa turan.Bara 2012 barreeffama mata dureen isaa “Ethiopia after meles” ykn Itiyoophiyaa mallas boodaa jedhu barreessanii odeeffaannoo guddaan kan irraa rgamee fi hedduu kan duddubachiise ture.
Barreefama isa ammaa Ethiopia leaders in Disarry jedhu kana irraa ka’uudhaan itti gaafatamaan sagantaalee gaanfa Afrikaa Peter Heinlein Rene Lefort waliin gaaffii fi deebii gaggeessee jira.
Previous Koree Hawaasa Musliimootaa irratti murtiin hidhaa waggoota dheeraa murteeffame.
Next Mee saamichaa biyyaa keenya oromiyaaf jijjirama maqaa biyya keenyaa dinaan jijjiramee waliin haa ilaalluu kan bara 1890 keessaaf kan bara kanaa!